आज भ्यालेन टाईन डे प्रेममा रमाउदै जोडीहरू
फागुन ३ गते भ्यालेन टाइन डे अर्थात् अंग्रेजी पात्रोअनुसार फेब्रुअरी १४ विशेष गरेर विश्वभरिका सबै नवप्रेमीहरूले मनाउने सुनौलो दिनको रूपमा चिनिने गर्दछ। आज विश्वभरि मात्र नभएर नेपालका नवप्रेमीहरूले पनि आजको दिनलाई उत्तिकै म�
सखुवानन्कारकटीमा आयोजित १० दिने झण्डा महोत्सव सम्पन्न
फिरोज शेख लहान २०७५ फागुन १ । &lsquo;कला संस्कृति हाम्रो स्वभिमान,समृद्ध सखुवानन्कारकटी हाम्रो पहिचान&rsquo;भने मूल नाराका साथ सखुवानन्कारकटीलाई आर्थिक ,सामाजिक र सांस्कृतिक रुपमा आत्मनिर्भर बनाउनको लागि सखुानन्कारकटी गाँउपालिका
सखुवान्कारकट्टीमा झण्डा महोत्सव
नवसंग्राम दैनिक लहान, १८ माघ । कृषि उत्पादनमा जोड दिँदै पहिचानलाई आत्मसात् गर्दै सखुवानन्कारकट्टीले झण्डा महोत्सवको तयारीमा जुटेका छन् । कला संस्कृती हाम्रो स्वभिमान , समृद्ध सखुवानन्कारकट्टी हाम्रो पहिचान भन्ने मुल नाराका
लहानमा ज्योती मगरको अश्लिलता चल्दैन
नवसंग्राम दैनिक लहान, ७ माघ । लहानमा ज्योती मगरको अश्लिल डान्ससहितको गीत प्रस्तुत नगर्ने सन्तोष राजले बताए । उनले भने यहाँको दर्शकका मनस्थितिलाई मध्यनजर गरी हाम्रो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत हुने बताए । सिरहाको लहानमा आउ�
जादुको जादु फिल्म नगरीमा
नवसंग्राम दैनिक&nbsp;लहान । नाम जादु काम पनि जादु । उनी हुन पूर्वका जादुगर अवधनारायण राजवंशी । सुनमा सुगन्ध थपिने मात्रै नभई कुरुपलाई पनि रुप दिएर प्रदर्शनमा ल्याउँने काम गर्छन् उनी राजवंशी । यसैले पनि उनलाई जादु भनेर फिल्मी कला
विवाहपञ्चमीको आज अन्तिम दिन, अयोध्याका जन्ती बिदाई गरियो
मंसिर २७। सप्ताहव्यापी विवाहपञ्चमी महोत्सव अन्तर्गत आज रामकलेवा अर्थात् बिदाई गरिएको छ । पौराणिक परम्परा अनुसार अयोध्याबाट आएका जन्तीलाई विवाह पश्चात् बिदाई गर्ने परम्परा अनुरुप आज रामकलेवा मनाइएको हो । विधि विधान अनुसार र
प्रकाशित मितिः मंसिर 27, 2075
किन रुदैं थिइन् लहानमा नायिका कसिस ?
लहान, २४ मंसिर । मिशन मधेशकी नायिका कसिस दाहाल लहान ९ मा रुदैंथिइन् । उनलाई चारैतीरबाट स्थानीयहरुले धैर्यतामा रहन आवाज दिइरहेका थिए । तर, उनको आँखाको आँशु रोकिरहेको थिएन् । उता, विरेन्द्र यादव, दिनेश पासमान, विष्णुदेव पाल र सोभि�
मिर्चैया : पतंजली योग समितिको भवन शिलान्यास
राम नारायण पंडित, सिरहा, १९ मंसिर । सिरहाको मिर्चैयामा पतंजली योग समितिको भवन एक कार्यक्रमकोबिच शिलान्यास गरिएको छ । योगलाई निरन्तारता दिनका लागि मिर्चैया नगरपालिका बडा नं. ८ स्थित भबनको सिरहा निर्वाचन क्षेत्र नं. ४ &lsquo;क&rsquo; का प�
प्रकाशित मितिः मंसिर 19, 2075
मिर्चैया– झन्डा मेला महोत्सव समापन : बिभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरु सम्मानित
राम नारायण पंडित, सिरहा, १८ मंसिर । सिरहाको मिर्चैयामा झन्डा मेला महोत्सबमा आयोजकद्धारा बिभिन्न क्षेत्रका ब्यक्तिहरु सम्मानित भएका छन् । मिर्चैया ५ स्थित झन्डा टोलमा सम्पन्न श्री श्री १०८ श्री महाविर झण्डा मेला महोत्सवको सात
लहान, १८ मंसिर । विगतमा भएको शोषण दमन र मधेश आन्दोलनलाई समेटिएर चित्रण गर्दै निर्माणमा रहेको मिशन मधेशको फाइट र क्लामेक्स आज सम्पन्न भएको छ । ५० लाखको लागतमा निर्माण भइरहेको यो मिशन मधेश फिल्म मधेशीभाखाको मैथिली भाषामा निर्माण
मिशन मधेशको एक सम्वादले नायिकाको नाममा थपियो मिशन कसिस
लहान, १० मंसिर । मधेशमा यत्तिबेला एक चलचित्रको सुटिंग भइरहेको छ । जुन मधेश आन्दोलनलाई समेटिएर तयारी भइरहेको मिशन मधेश फिल्म हो । जसको नायिका हुन् कसिस । लहान ५ बलुवा टोल स्थित सुटिंग भइरहँदा नायिका कसिसप्रति स्थानीय महिला तथा ब�
कमला नदीमा भूतमेला : तन्त्रमन्त्र गर्न धामीझाक्रीको घुइँचो
राम नारायण पंडित, सिरहा, ०७ मंसिर । सिरहा र धनुषाको सिमाना भएर वग्ने कमला नदीमा सूर्योदयसँगै आज हजारौँ नव धामीझाँक्री वोक्सावोक्सी पवित्र जलमा डुबुल्की लगाए । हजारौ स्त्री पुरुष दुवैपट्टिका नदीका किनारमा भगता (देउता) खेलिरहेक�
ऐतिहासिक र मधेश आन्दोलनसँग जोडिएको चलचित्र मिशन मधेश
लहान, ६ मंसिर । मधेशको ऐतिहासिक घटनालाई मधेश आन्दोलनसँग जोडर निर्माण भइरहेको मिशन मधेश चलचित्र यत्तिबेला जनचासोको विषय बनेको छ । कात्तिक २७ गतेदेखि सुटिंग शुरु भएको यस चलचित्रमा मधेश आन्दोलनका वास्तविक अगुवा दिनेश्वर गुप्ता